यी साना विभेद – Mero UK
‘अब हेर्नु छ, पहिरो कसको निधारमा जान्छ, तिम्रो निधारमा कि तिम्रो भाइको?’ पहिलोपटक यस्तो सुन्दा मैले केही बुझिनँ । बुझ्थेँ पनि कसरी? तर यो प्रश्न आमाको पेटमा बहिनी हुँदा मलाई बारम्बार सोधियो । यस प्रश्नको अर्थ र तात्पर्य खोज्न बाध्य भएँ । कसलाई सोधूँ थाहा थिएन । अघिपछि आफ्ना सबै कुरा आमासँग बताउने म त्यो बेला भने आमासँग सकभर कम बोल्थेँ । किशोरावस्थामा आउने मानसिक र शारीरिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नमा नै संघर्षरत मलाई यस्ता जिज्ञासा आमाको कारणले आएका हुन् भन्ने पनि लाग्थ्यो ।
त्यसैले होला, त्यति बेला म आमासँग एकदम दूरी राख्थेँ । बुझक्की आफन्तको प्रश्नको उत्तर बताइदिने कोही नपाएपछि मैले एक दिन भाइलाई सोधे । बल्ल थाहा भयो, यो प्रश्न त उसलाई समेत पटकपटक सोधिएको रहेछ । उसले पनि केही भेउ पाउन सकेको रहेनछ । दिदीभाइ भएर निकै बेर बुद्धि लडाएपछि बल्ल ठूलीआमालाई सोध्न जाने अक्कल आयो । उहाँबाट थाहा पायौं, म र भाइ दुवैजनालाई गरिने यो प्रश्नको अर्थ आमाबाट अब हुने बच्चा छोरा हुने कि छोरी हुने भन्ने पो रहेछ । छोरा जन्मे मेरो भाइको निधारमा पहिरो जाने अर्थात् भाइको दायरा साँघुरो हुने अनुमान रहेछ । अनि छोरी जन्मेको खण्डमा मेरो निधारमा पहिरो जाने भन्ने रहेछ ।
पहिरो भनेको त प्रकोप हो । एउटा जन्मलाई कसरी प्रकोपसँग तुलना गर्न सकिन्छ? आज पनि त्यो प्रश्न सम्झेर सिरिंग भइरहन्छ । मेरो बहिनी जन्मी, उसले मेरो निधारमा पहिरो त हैन बरु उमेरमा मभन्दा धेरै सानी भएर पनि मेरी साथी भएकी छ र अतुलनीय खुसी दिएकी छ । मेरा छिमेकका दाइभाउजू वैवाहिक जीवनमा एकदमै खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । दाइभाउजूको बीचमा परिवार, करिअर, समाज, साहित्य, संगीत, खेलकुददेखि प्रविधिसम्मका विविध विषयमा हुने खुला छलफलले मलाई सधैं आनन्दित तुल्याउँछ । कलेजको पढाइ नसक्दै बिहे गरे पनि पढाइमा सम्झौता नगर्ने भन्ने सिद्धान्तमा अडिग उहाँहरू एकले अर्कोलाई गर्ने सम्मान र सहयोगको म सदा प्रशंसक हुँ । उहाँहरूले करिअरको जग बलियो बनाएर मात्र बच्चा जन्माउनका लागि केही समय पर्खिने सोच बनाउनुभएको रहेछ । विवाहको पहिलो वर्षभित्र नै बच्चालाई बम्पर उपहारजस्तो अपेक्षा गरिने समाजमा विवाहका केही वर्षसम्म बच्चाको सम्बन्धमा मौन उहाँहरूलाई सल्लाहहरू आउन सुरु भयो । छिटो गर, पछि गाह्रो होलाजस्ता सामान्य भनाइबाट सुरु भएका सल्लाह पछि ‘कठैबरा फलानाको त सन्तान नै भएनन्’ भन्ने टिप्पणीमा परिणत भए ।
ससाना लाग्ने यी टिप्पणी नगरेर, मुफतमा सल्लाह नदिएरै विभेदका पर्खाल भत्काउन सकिन्छ र सुन्दर समाज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यानचाहिँ कहिले जान्छ?
सामाजिक सञ्जालमा कसैको बच्चाको जन्मदिनमा वा जन्म भएकोमा शुभकामना दिँदासमेत जवाफ आउने रहेछ, ‘तपाइंलाई हामीले बधाई दिन कहिले पाउने ? ‘ फोटोग्राफीको सोखिन उहाँले कहिलेकाहीँ कुनै बच्चाको फोटो फेसबुकमा राख्दा आउने कमेन्टको लर्को रोक्ने पछि उहाँले लामो लामो विवरणसहितको क्याप्सन राख्नुपर्ने भयो । ‘यो फोटो यस्तो समारोहको हो, सबैलाई नझुक्किन हार्दिक आग्रह ।’
दाइलाई कसैले अचुक ओखती, झारफुक, प्रविधिको प्रयोगदेखि तान्त्रिक मान्त्रिकको सहयोगसमेत सुझाउँदा रहेछन् । कोही भने उहाँहरूलाई स्वदेशी डाक्टरसँग परामर्श लिने सल्लाह दिँदा रहेछन । कसैकसैले त विदेशी डाक्टरकहाँ जाने, टाढा नगए पनि दिल्लीसम्म पुग्न अनि अरूलाई चैं घुम्न गाको भन्नेजस्ता पूर्ण योजनासहितका सुझाव दिँदा रहेछन् ।
दुई वर्षअघि दाइभाउजू दुवैजना पढाइ सकेर विदेश जानुभयो । अहिले उहाँहरूको एक वर्षको बच्चा छ । भाउजू भन्नुहुन्छ, ‘जिन्दगीमा सोधिएका हजारौं प्रश्नको एकमुष्ठ जवाफ अहिले यही बच्चा लाग्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा यदाकदा मात्र लेख्ने दिदीले केही हप्तापहिले स्टाटस राख्नुभयो, ‘मेरो जीउ, मेरो पाठेघर, मेरो अधिकार । तिमीलाई किन सरोकार ? मन लागे बच्चा जन्माउँछु, मन नलागे जन्माउँदिनँ । मलाई बच्चा पाऊ भन्ने तिमी को?’ । बुझ्न गाह्रो थिएन, उहाँ पनि सन्तानसम्बन्धी विज्ञ शुभचिन्तकहरूका निःशुल्क सुझाव र सल्लाहले आजित भइसक्नुभएको थियो ।
अक्सर मलाई निजी विषय र चौतारीका प्रसंगमा भिन्नता छुट्ट्याउन सुझाउनुहुने तथा आफू पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत जीवन पोख्न नचाहने दिदीले एक्कासि सार्वजनिक रूपमै मौनताको बाँध टुटाउनुका पछाडि बकम्फुसे सुझावहरूको हात छ भन्ने प्रस्टै हुन्छ ।
मलाई कक्षा ७ मा सामाजिक शिक्षा पढाउने मिस सम्झन्छु । घरको जेठो छोरासँग विवाह भएको थियो उहाँको । ‘कस्तो बलियो निधार रहेछ, चारजना देवरकी भाउजू, आमापछिकी भाउजू बहुत सम्मान पाउँछ ।’ मिसको बिहे पक्का भएदेखि टोलछिमेकले उहाँको चर्चा गरे । उहाँकी सासूआमाले बुहारी भित्याउँदा भन्नुभयो— घरमा पाँच छोरामात्र थिए, तिमी आयौ, बुहारी हैन छोरी पाएँ । हुन पनि उहाँलाई सबै देवरले सम्मान नै गरे । उहाँको पहिलो छोरी नजन्मने बेलासम्म साह्रै माया गर्नुभएछ । दोस्रोपटक मिस दुई जीउकी हुँदासम्म पनि नातिको आशमा सासूआमाले उहाँलाई माया नै गर्नुभएछ । तर, दोस्रो बच्चा पनि छोरी भएपछि सानी छोरीकोे स्याहार गर्नु त परै जाओस् मुखसम्म हेर्नुभएनछ ।
मिस छोरी लिएर माइत आएको थाहा पाउनेबित्तिकै फुरर्र उड्दै उहाँकोमा पुगेकी म उहाँको कुरा सुनेर गहभरि आँसु र मुटुभरि पीडा लिएर घर फर्केँ ।
मेरो दाइ र भाउजूको एउटा नानी छ । एउटा सन्तानलाई असल शिक्षा र संस्कार दिएर आफ्नो अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्ने हो भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । घरमा पाहुना बनेर गएका एक आफन्तले १० वर्षकी छोरीको अगाडि उहाँलाई यतिका वर्ष छोरा त के दुई सन्तानसम्म नदिने श्रीमतीको मायामा रुमल्लिएर नबस्न र अर्को बिहे गर्न सुझाव दिएछन् । यस्तो अप्रत्याशित सल्लाहले दाइ अवाक् हुनुभएछ । केही बेरको मौनतापछि यस्तो कुरा आफ्नो कल्पनामा समेत नभएको र एक सन्तानले नै आफूहरू परिपूर्ण भएको जानकारी दिनुभएछ ।
दुई हप्तापहिले उसले फोन गरी, ‘एउटा सुनाउनैपर्ने कुरा भन्न’का लागि । एक निमेषमा भनेर सकी, ‘त्यो उहिले मलाई भविष्यमा छोरी पाउली भनेर रिजेक्ट गरेको मान्छेको त दुईवटा बच्चा रहेछन्, छोरीहरू ।
लिभिङ रुममा टेलिभिजनमा कार्टुनमा मस्तजस्तो देखिएकी छोरीले त्यो वार्तालाप सुनेकी रहिछन् । भोलिपल्ट आफस् जन्मेकोमा ‘सरी’ भनिछन् बाबालाई । उनलाई दाइले सम्झाउनुभएछ— उनको उपस्थितिले उहाँहरूको जीवनमा दिएको खुसीको कुनै लेखाजोखा नै छैन भनेर ।यो घटना मलाई सुनाउँदा भाउजूको एउटा आँखामा सन्तानको माया र अर्को आँखामा जीवनसाथीले आफूलाई दिएको साथको तृप्ति प्रस्ट झल्कन्थ्यो ।
केही वर्षपहिले साथीको बिहेको कुरा चल्दै थियो । स्कुल पढाउने ऊ बिहेको लागि राखिने सबै सर्तमा उत्तीर्ण भई । केटा र केटी भेटाउने काम भयो । केटा ठिकै लाग्यो भन्थी । तर, एक्कासि कुरा रोकियो । बिहे रोकिनु त खास अनौठो कुरा भएन, तर कारण चैं बिलकुल नौलो थियो । चार दिदीबहिनीमध्ये ऊ कान्छी हो । उसकी आमाले छोरा नजन्माएजस्तै उसले पनि छोरा नजन्माउली कि भन्ने अनुमान गरेछन् केटा पक्षले । त्यही आधारहीन अनुमानका कारण रोकिएको रहेछ उसको बिहे । यस्तो सोच भएका मान्छेसँग जोडिनुभन्दा पहिले नै छुटकारा पाएकोमा मक्ख भएको सुनाई । केही समयभित्र नै साथीको बिहे भयो अर्कै केटासँग । अहिले उनीहरूको दुईवटा बच्चा छन्, छोरा र छोरी ।
दुई हप्तापहिले उसले फोन गरी, ‘एउटा सुनाउनैपर्ने कुरा भन्न’का लागि । एक निमेषमा भनेर सकी, ‘त्यो उहिले मलाई भविष्यमा छोरी पाउली भनेर रिजेक्ट गरेको मान्छेको त दुईवटा बच्चा रहेछन्, छोरीहरू । तर मलाई त उसकी श्रीमतीको माया र पीर पो लाग्यो त । अँ, साँच्चि, उसले आफ्नो श्रीमतीलाई त माया गर्छ होला नि । यो बहानामा ‘रिजेक्ट’ त नगर्ला नि ? ‘मेरो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न सलबलाइरह्यो । आफ्नै सन्तानलाई कसैले लिंगकै आधारमा कसरी ‘रिजेक्ट’ गर्न सक्छ कि सक्दैन?
दसैंमा मसँगै टीका थाप्न हिँड्छे बहिनी । उसले पोहोर साल सोधी, ‘दिदी, हजुरलाई पहिले दिइने आशीर्वाद र मैले अहिले पाउने आशीर्वाद उस्तै होला । तर, मलाई हजुरलाई दिइने आशीर्वाद त कस्तो ‘इम्पोज्ड’ गरेको जस्तो पो लाग्छ । कुनै बेला मेरो निधारमा पहिरो ल्याउने सम्भावना राखेको मेरी सानी बहिनी समेतले मिहिन ढंगले नियालेकी रहिछ आशीर्वाद बीचमा रहेको फरकलाई । उसले थपी, ‘मैले नि भोलिपर्सि पाउने आशीर्वाद हजुरले अहिले पाउने खालको हुने होला है । आशीर्वाद त मान्छे अनुसारको पो हुँदो रहेछ ।’ विगतका धेरै दसैंका आशीर्वादलाई सम्झेर निष्कर्षमा पुगेँ ।
विशेषगरी ठूलाबडाले दिने आशीर्वादमा समेत यस्तै मनशायका आशीर्वाद प्राप्त हुने रहेछ । आशीर्वादको स्तर र घनत्व प्रत्येक साल बढ्ने गरेको पो रहेछ, ‘अनुशासित हुनु । ज्ञानी हुनु । जेहेनदर हुनु । नामी हुनु । राम्ररी पढ्नु । फस्ट डिभिजन ल्याउनु । क्याम्पस पढ्ने भयौ, ल बाबै ख्याल गर्नु नि, अर्काको घरमा जाने जात पो हौ त । पढ्नेका जमाना छन्, बीए पास गर्नु । सरकारी जागिरे हुनु । अब आफ्नो खुट्टामा उभिनु । लौ अब, पढाइ सक्यौ, जागिर छ, हामीले टीका लगाएर जिम्मा दिन पाइयोस् ।’
मलाई दिइने आशीर्वादभन्दा मभन्दा चार वर्षमात्र ठूलो दाइलाई दिइने आशीर्वाद अलिक फरक हुने रहेछ, ‘कुलको इज्जत राख्नु । बाआमालाई पाल्नु । सबैको हाइहाई नै भइराख्नु । चार लोकमा यश फैलाउनु । सहरमा घडेरी किन्न पुग्ने गरी कमाउनु । आफ्नो बास बनाउनु । मोटरसाइकल त छ क्यारे, अब गाडी किन्ने मेसो गर्नु ।’
दिदी र भाउजूलाई दिइने आशीर्वाद भने ‘घर राम्ररी खानू । परिवार रिझाउनू ।’ कतैकतै आफ्नो खुट्टामा उभिन र पढाइ पूरा गर्नसमेत हुन्थ्यो । बच्चा नजन्माएकालाई भने सबै ठाउँमा अटुटजस्तै आउने आशीर्वाद ‘अर्को पालि नातिनी र नाति काखमा लिएर आउनू’ भन्ने हुन्थ्यो । पहिलो सन्तान छोरा हुनेलाई ‘ल अब ढुक्क भयो ।’ अनि पहिलो सन्तान छोरी हुनेलाई, ‘ल ठिकै छ; लक्ष्मी आई, अब भाइको पालो ।’ पहिलो सन्तान छोरी जन्मेको ठाउँमा ‘एउटा भाइ त चाहियो नि’ । तर पहिलो सन्तान छोरा भएकोलाई ‘जमाना महँगो छ, यसैलाई हुर्काए त सक्किगो नि’ । लगातार दुई छोरा जन्माउनेलाई साहै्र भाग्यमानी र छोरीहरू जन्माउनेलाई चैं ‘भनेर भएन, भगवानले दिएन’ भनिँदो रहेछ ।
यी केही प्रतिनिधि प्रसंग हुन् । यस्ता बगे्रल्ती प्रसंग र अनुभव हाम्रा वरिपरि नै छन् । यसरी अरू कसैको व्यक्तिगत जीवनका नितान्त निजी विषयवस्तुमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्न के जायज हो? हाम्रो सोच, विचार र मान्यता अरूको दिमागमा थोपर्ने, बेतुकका प्रश्नको भारीले अरूको खुसीलाई थिच्ने छुट कसले दियो? यी सवालमा स्वयं उसले न हामीसँग सल्लाह मागेको अवस्था बाहेकमा उसलाई हाम्रा विचार थोपर्नु कहाँसम्म उचित हो? कसैले सोधोस्, नसोधोस्; राय मागोस्, नमागोस्— सल्लाहको फेहरिस्त दिने हामी को हौं?
हामीलाई प्रश्न, जिज्ञासा वा सल्लाहजस्ता लाग्ने भनाइका पछाडि विभेदका गहिरा खाडलहरू उभिएका छन् । एकातर्फ यी टिप्पणीले विभेद कायम नै राखिराखेका हुन्छन् भने आफ्नो जिन्दगीका महत्वपूर्ण सवालबारे आफैंले निर्णय गर्न पाउने वैयक्तिक अधिकारको उल्लंघन पनि गरिरहेका हुन्छन् । ससाना लाग्ने यी टिप्पणी नगरेर, मुफतमा सल्लाह नदिएरै विभेदका पर्खाल भत्काउन सकिन्छ र सुन्दर समाज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यानचाहिँ कहिले जान्छ?
– मिरा ढकाल